ኢሳይያስ 14 NASV – Yesaia 14 AKCB | Biblica
ኢሳይያስ 14 NASV – Yesaia 14 AKCB
1Awurade behu Yakob mmɔbɔ;
ɔbɛsan afa Israel
na ɔbɛbɔ wɔn atenase wɔ wɔn ankasa asase so.
Ananafo bɛba abɛka wɔn ho
na wɔne Yakobfi aka abɔ mu.
de wɔn aba wɔn ankasa atenae.
Na Israelfi bɛfa amanaman no ayɛ wɔn de
Wɔbɛyɛ wɔn a wɔyɛɛ wɔn nnommumfo no nnommum
na wobedi wɔn sohwɛfo so.
3Na da a Awurade bɛma mo ɔhome afi amanehunu, ahoyeraw ne nkoasom dennen mu no, 4mubedi Babiloniahene ho fɛw se:
hwɛ sɛnea sohyɛfo no aba nʼawie!
ne sɛnea nʼabufuw nso to atwa!
5Awurade abubu otirimɔdenfo no abaa mu,
sodifo ahempema no,
6nea abufuw mu no ɔde bobɔɔ wɔn
na abufuwhyew mu otintim wɔn so a ahomegye nni mu
de brɛɛ amanaman no ase no.
7Nsase no nyinaa rehome wɔ asomdwoe mu;
8Mpo, ɔpepaw nnua ne Lebanon sida
nya ho anigye na wɔka se,
duatwafo biara remmetwa yɛn.”
9Awufo nna a ɛwɔ ase no rekeka ne ho
abehyia wo kwan;
ɛkanyan wɔn a wɔafi mu no honhom
wɔn a na wɔyɛ akannifo wɔ wiase
ɛma wɔsɔre fi wɔn nhengua so,
10Wɔn nyinaa begye so,
wɔbɛka akyerɛ wo se,
“Wo nso woayɛ mmerɛw sɛ yɛn;
11Wo kɛseyɛ nyinaa wɔde aba ɔda mu,
ne huuyɛ a efi wo asanku no;
wɔde nsaammoa asɛw kɛtɛ ama wo
na asunson akata wo so.
12Sɛnea wufi ɔsoro abɛhwe fam,
anɔpa nsoromma, adekyee babarima!
wo a na kan no wobrɛ amanaman ase!
13Wokaa no wo koma mu se,
“Mɛforo akɔ ɔsoro;
mɛma mʼahengua so
mɛtena ase adi hene wɔ ahyiae bepɔw so,
nea ɛkorɔn pa ara wɔ bepɔw kronkron no so.
15Nanso wɔde wo abɛto ɔda mu,
amoa donkudonku ase tɔnn.
16Wɔn a wuhu wo no hwɛ wo haw,
wodwen nea ato wo no ho bisa se,
“Ɛnyɛ ɔbarima a ɔwosow asase
na ɔmaa ahenni ho popoe,
17ɔbarima a ɔmaa wiase dan nweatam,
nea ɔdan ne nkuropɔn butuwii
na wamma ne nneduafo ankɔ wɔn nkyi no ni?”
18Amanaman ahemfo no nyinaa wɔadeda wɔn
obiara wɔ ne da mu.
19Nanso wɔapam wo afi wo da mu
te sɛ dubaa a wɔapo;
wɔde wɔn a wɔatotɔ akata wo so,
wɔn a wɔtɔɔ wɔ afoa ano,
wɔn a wosian kɔ abo amoa mu,
te sɛ funu a wɔatiatia so,
efisɛ woasɛe wʼasase
na wakunkum wo nkurɔfo.
Otirimɔdenfo asefo no
wɔrenkae wɔn bio. Wo babarima renni wʼade sɛ ɔhene.
21Siesie faako a wobekunkum ne mmabarima
“Metwa ne din ne ne nkae,
ne mma ne ne nenanom afi Babilonia ho,”
23“Mɛdan no ayɛ faako a mpatu wɔ
mede ɔsɛeprae bɛpra no,”
Nkɔmhyɛ A Etia Asiria
24Asafo Awurade aka ntam se,
“Nokware, sɛnea mahyehyɛ no, saa ara na ɛbɛyɛ,
na sɛnea masusuw no, ɛrensesa.
metiatia no so me mmepɔw so.
Obeyi ne konnua afi me nkurɔfo so,
na nʼadesoa nso afi wɔn so.”
26Eyi ne nhyehyɛe a wɔayɛ ama wiase nyinaa;
eyi ne nsa a wɔateɛ wɔ aman nyinaa so.
27Na sɛ Asafo Awurade ayɛ nʼadwene a hena na obesiw no kwan?
Na sɛ wateɛ ne nsa, hena na obesianka no?
Nkɔmhyɛ A Etia Filistifo
28Saa adehu yi baa afe a ɔhene Ahas wui no:
29Munnni ahurusi, mo Filistifo,
saa ɔwɔ no ase na ahurutoa befi aba,
na nʼaba bɛyɛ ɔwɔ a ne ho yɛ hare na nʼano wɔ bɔre.
30Ahiafo mu hiani benya didibea,
na mmɔborɔni bɛda asomdwoe mu.
Nanso wʼasefo de, mede ɔkɔm bɛtɔre wɔn ase;
ebekunkum wo nkae no.
31Twa adwo, kurow pon! Su teɛ mu kuropɔn!
munguan, mo Filistifo!
Wusiw kumɔnn bi fi atifi fam reba,
32Mmuae bɛn na wɔde bɛma
saa ɔman no ananmusifo?
“Awurade de Sion atim hɔ,
ne mu na nʼamanehunufo benya guankɔbea.”
AKCB : Yesaia 14